Baro in la abuuro HTML Photo Gallery u Website Talaabo Talaabo
> Resource > Video > Sida loo sameeyo HTML Photo Gallery u Website
Ma doonaysaa in la abuuro gallery flash sawir ama slideshow ee HTML, ka dibna u geliyaan in ay website aad HTML? Waa kuwan sida. Yar oo ku saabsan HTML ogayn? Probrlem No, ee paragrapghs soo socda ku tusi doona sida si ay u abuuraan gallery ah flash sawir cajiib ah si fudud, adigoo isticmaalaya Wondershare Flash Gallery Factory .
Barnaamijka gallery flash Tani daraasiin 2D ama 3D sawir free arrimo gallery oo kuu oggolaanaysa in aad si fudud oo dhaqso uga dhigi a gallery sawir qurux badan ku bixisaa. Kuwa abuuray flash sawir gallery badbaadi kara sida HTML, Jabbuuti, EXE, Screensaver, iwm Tusaale ahaan, haddii aad tahay oo ku saabsan in la sameeyo huuriyo html sawir, oo aad si toos ah u heli doontaa code html ah oo ay awoodaan si ay u paste in aad blog ama goobta si toos ah. No aqoon HTML ka hor inta loo baahan yahay.
1 Images Import Digital oo Music Background
Burcad gallery HTML sawirka samaynta software, ka soo xusho laba doorasho: Gallery iyo Muqaal laba hababka sida ay baahidaada. Qaado Muqaal Mode tusaale ahaan halkan.
Riix badhanka "sawir dar" ama toos uun jiidi sawirada galay storyboard in lagu daro aad sawiro digital. Markaas guji "Add music" button ku darto music asalka u ah HTML sawir gallery haddii aad rabto.
2 Dooro a Photo Gallery Template
Flash Gallery Factory waxay bixisaa in ka badan 60 2D bilaash ah ama html 3D arrimo sawir gallery .Waxa aad dooran kartaa mid ka mid ah aad ugu jeceshahay. Baro wax badan oo: template ee sawir gallery .
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Save Flash Photo Gallery sida Qaabka HTML
Riix badhanka dhex naadiya, ku eegaan aad html sawir gallery oo u badbaadin doonaa in qaab HTML. File Jabbuuti oo A iyo bogga HTML ah la abuuri doonaa folder cayimay. Waxa kale oo aad daabici karo sawir gallery ee Jabbuuti oo kaliya, file is-socda (exe), ama qaababka screensaver, iyo xataa si toos ah boostada gallery sawirka si aad saaxiibo ah (la ciyaaro browser ama Flash player standalone).
Talooyin: Upload ama Embed HTML Photo Gallery in Website
Waxaa jira 3 hab oo ku haboon si ay u wadaagaan gallery sawir aad ee HTML page.
1. Upload HTML page iyo Jabbuuti file: ka dibna Waxaad gali kartaa file u Jabbuuti oo flash iyo HTML page in web aad server via FTP ama uploader online. Hubi in folder la mid ah, haddii kale, waxaad u baahan tahay in la beddelo URL ee code HTML ah. Visiters aad isla markiiba way arki doonaan.
2. Upload Jabbuuti oo si gooni gooni ah iyo in la beddelo xeerka HTML ah : Waxaad daabici kartaa sawir gallery flash oo qaab Jabbuuti, geliyaan si ay u meel online ah (sida WordPress), oo nuqul ka & paste ku codes HTML ahbaa in booska qaarkood webpage aad la doonayo ama blogger ah. Fadlan kaliya ha iloobin in aad dib ugu cinwaanka cas file Jabbuuti oo si aad cinwaanka dhabta ah, kaas oo aad ka heli doonaa ka dib markii koombiyuutarka guul online.
Ogsoonow in gallery html sawirka 's size sidoo kale waa la bedeli karaa by dib u tiro cas "264" iyo "550". Hoos waxaa ku qoran xeerka caadiga ah HTML in Cudarada gallery sawir aad ee bogga. Tani waxay noqon kartaa mida ugu fudud si ay ula wadaagaan gallery sawir saaxiibadaa ah.
<Nooca wax = "codsiga / x-shockwave-flash" allowScriptAccess = "marnaba" allowNetworking = "gudaha" magac = "allowScriptAccess" Qiimaha = "marnaba" /> <param name = "allowNetworking" Qiimaha = "gudaha" /> <param name = "movie" Qiimaha = "http://www.flash-gallery-software.com/ images / Casharrada / flash_banner / banner550.swf " /> <param name = "" Qiimaha = "tayo sare leh" /> </ shay>
Qabtay. An gallery HTML sawir la abuuri karaa in qasabno in ay isla wadaagaan online. Riix halkan si aad u daawato ka -baarka sawir gallery HTML in waxyoonay.